पोर्तुगलमा १४ बर्स जेल सजाय भोगिरहेका नवीन गिरिले लेखेको खुला पत्र एक पटक सबैले पढनै पर्ने । | EuropeNepal.Net
00Europe Nepal Thursday, October 5, 2017
A HeartTouching letter of Nabin Giri who sentenced for 14 Years jail in Portugal
आफ्नै कम्पनीमा काम गर्ने कामदारहरुले पोतुगलको रेसिडेन्सी बनाउनाको लागि झुटो बयान पछि बिना कसुर पोर्तुगलमा १४ बर्स जेल सजाय भोगिरहेका नवीन गिरिले लेखेको खुला पत्र एक पटक सबैले पढनै पर्ने ।
अपराध/कर्तव्य गर्नेले मात्र कहाँ सजाय भोग्दो रहेछ।
आदरणीय दाइ हरु
तपाईहरु पोर्तुगल आउनु भयो, पोर्तुगल सम्म आउनुमा मेरो कुनै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भुमिका थिएन । तपाईहरु सबैले पोर्तुगल आउने प्रत्येक नेपाली झैँ एउटा साझा उद्देश्य बोकेर आउनु भएको थियो ‘‘पोर्तुगल रेसीडेन्सी कार्ड’’जुन अहिले युरोप आउने प्रत्येक नेपालीको केन्द्रको विषय बनेको छ । तपाईहरु र मेरो भेट पोर्तुगलमा जसरी अन्य नेपालीहरु सँग सामन्य तरिका सँग हुन्छ । त्यसरी नै भएको थियो । म कास्की समाज पोर्तुगलको अध्यक्ष थिएँ । युरोपमा कस्केलीहरुको पहिलो संगठन कास्की आदर्श समाज, पोर्तुगलको संस्थापक अध्यक्षको नाताले प्रत्येक कस्केलीहरु जो सहयोगको अपेक्षा राख्दै समाज सम्म आईपुग्छन उनीहलाई समाजका कार्यकारी समितिका सबै साथीहरुले आफ्नो समय र फुर्सदको मेसो मिलाएर गर्ने गरेको थियो ।
म संस्थापक अध्यक्ष भएको नाताले पोतुर्गल सम्म आईपुग्दा बेखर्ची पासपोर्ट च्यातेको, आफन्त साथीभाईको सम्पर्क नभएकालाई कम्तिमा ४ दिन सम्म खाना र बस्नको व्यवस्था फ्रिमा उपलब्ध गराईदिने गरेको थिए । साथै पदाधिकारी मित्रहरुको समन्वयमा फिनान्स कार्ड, पुलीस रिपोर्ट बनाउन सहयोग गर्ने गर्दथ्यौँ । फिनान्स कार्ड, पुलिस रिपोर्ट वा अन्य सहयोग समाजले निशुल्क गर्ने गरेको थियो । पोर्तुगलमा समाजमा नजाने साथीभाई नहुने नेपालीहरुले धेरै रेडलेबल र सयौँ युरो खर्च पश्चात मात्र त्यो कार्य सम्पन्न गर्न सक्दथे । पोर्तुगलको चोकमा रहेको नेपाली कफि पसलको मालिक धन शेर्पा र गोरखा होस्टेलका मालिकले कास्की बाट आएका वा फिनान्स नं. पुलिस रिपोर्ट नभएका व्यक्तिलाई मेरो व्यक्तिगत नम्बर सार्वजनिक रुपमा दिएने गरेको यर्थाथ छ । कस्केलीलाई मात्र नभएर मैले विदेशमा आफुले गर्न सक्ने सहयोग सबै नेपालीलाई गर्ने गरेको थिए ।
२०१४ सालको कुरा हो एन आर एन पोर्तुगलको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यक्रम राखिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा दर्शक दिर्घाबाट १ जना दाई सुक्क सुक्क रोई रहनु भएको रहेछ कार्यक्रमका आयोजक र हामीले दाई रुनुको कारण बुझ्यौँ उहाँको नाम सुब्रत रिमाल रहेछ नेपालबाट खेतीको काममा पोर्तुगल आई काम गर्ने क्रममा मृगौला फेल भएको रहेछ । भोली पल्ट सेफमा फिन्गरको डेट रहेछ साथमा पैसा रहेनछ फिन्गरको पैसा तिर्नको लागि दाईलाई स्टेजमा आफ्नो समस्या राख्न लगाइयो दाई भक्कानो छोडेर रुनु भयो, भगवान सँग आफु नृहय भएको भावना आकाश तर्फ फर्केर निधा।रमा दुवै हातले हानेर व्यक्त गर्नु भयो । मेरो मन अमिलो भयो उपस्थित सबै जनाले सहयोग गर्ने भनि चन्दा संकलन गरियो । जसमा ११० युरो म आँफैले चन्दा प्रदान गर्दै बिदेशी भुमिमा यस्तो दुख भोग्न नपरोस भनि कामना गरेको थिए । पछि सुब्रत दाईको कार्ड भयो । ले समिति नै बनाएर सहयोग संकलन गर्यो पुन मैले ५० युरो दिए । पोर्तुगलमा हुने हरेक सामाजिक तथा साँस्कृतीक प्रबर्धनका कार्यक्रम मेरो प्रत्येक्ष सहयोगी भुमिका हुने गर्दथ्यो ।
पोर्तुगलमा रहेका सम्पुर्ण खेती कम्पनि बीच अध्याधिक प्रतिशपर्धा थियो । आफुहरु सबै कम्पनिका अफिस घुम्दै घुम्दै मेरो अफिस सम्म आईपुग्यौ, मैले स्पष्ट रुपमा हाम्रो कम्पनिले दिने रेट र सुविधाका बारेमा जानकारी दिए, सायद अरु कम्पनि भन्दा आफुहरुलाई राम्रो लाग्यो क्यार काम गर्न तयार भयौ आफ्ना समस्याहरु राख्यौ मैले पनि मेरो तर्फबाट हुन सक्ने र गर्न सक्ने सबै कुरा गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । खेती सिजनल काम भएको हुँदा सधैँ काम दिन असम्भव हुन्छ । यो तिमिहरु सबैलाई थाहा थियो । धेरै भए पनि महिना नछुटने गरी ट्याक्स हाल्न पाए कार्ड हुन्थ्यो भन्ने आशय साथ कन्ट्रयाक माग्यौँ मैले पनि तिमिहरुको विचारलाई सम्मान गरे बाध्यताको सम्मान गरे र कन्ट्रयाक्ट दिए । काम सुरु भयो तिमिहरुलाई काम गर्न ज्ञान थियो काम गर्ने बानी थिएन । बिस्तारेै काम सिक्यौ काममा बानी पार्यौ त्यो बिचमा तिमिहरुसँग गएको कतिले काम गर्न नसकेर कतिले काम मन नपरेर काम छोडे तर तिमिहरुले काम गर्योै हाम्रो बिचमा बिस्तारै भावनात्मक सम्बन्ध बढ्दै गयो । फुर्सदका समयमा तिमिहरुका पर्सनल समस्याहरु समेत सम्पन्न गर्न सहयोग गरीयो ।
तिमिहरु हप्तै पिच्छे खसी काटेर मलाई बोलाउने गर्थ्यौ । म पनि तिमिहरुसँग आएर बस्ने, सँगै खाने खेतीमै सुत्ने गर्थे । खाना पकाउन सरल होस भनेर २० लि. राईसकुकर प्रत्येक १० जनाको गु्रपमा १ को दरले निशुल्क उपलब्ध गराएको थिए । इन्डियन पसलबाट आवश्यक पर्ने सम्पुर्ण खाध पदार्थ तिमिहरुको माग अनुसार सधैँ उपलब्ध गराए, मैले लिएर गए ड्राईभरलाई पठाए । पैसा नेपाल पठाईदेउ भन्यो उपेन्द्रले पठाइ दियो, इन्टरनेट कार्ड, फोन कार्ड माग्यौ सबै पठाइदिन्थे । उपेनले तिमिहरुलाई आवश्यक पर्ने सबै सहयोग गर्यो । तिमिहरु साह्रै खुसी साथ काम गरेका थियौ । तिमिहरुको चिन्ता कार्डको थियो मैले पनि जाने बुझेको उपयुक्त जानकारी उपलब्ध गराएर सान्तोवना दिएको थिए । तिमिहरुले काम गरेको घन्टाको रेकर्ड तिमिहरु मध्ये कै लिडर भाई सुरजले पठाउने गर्थे कहिल्यै पनि १ घण्टा पनि तल माथि नगरी काम गरेको पैसा पे गरेको थिए । मेरो कम्पनिमा काम गर्ने कसैलाई पनि म प्रकाउ पर्ने पछिल्लो महिना बाहेक १ युरो पनि तिर्न बाँकी थिएन ।
काममा गु्रपमा बस्दा कहिले काँही अप्रत्यासीत घटना पनि हुन सक्दछ स्वास्थ्यमा समस्या देखिन सक्छ भनेर सधैँ आवश्यक होसीयारी अपनाउन सल्लाह दिने गरेको थिए । यदि दुर्घटना भएमा कुनै अप्रत्यासीत घट्ना भएमा स्वास्थ्यमा कुनै समस्या देखिएमा मेरो पर्सनल नम्बरमा भ्ःन् लेखेर मेसेज गर्दा रातको १२ बजे पनि आफु उपलब्ध हुने गरेको थिए । एक पटक ताभीरामा काम गर्ने एक भाईलाई राती ११ बजे मुटु दुखेर प्वाक प्वाक भएको खबर आयो म ३०० कि.मि. टाढा थिए । इमरजेन्सी सर्भिसमा फोन गरेर एम्बुलेन्स उपलब्ध गराए, त्यसपछि ताभीरा चोकमा रहेको कफि सप साहुलाई फोन गरे र अनुनय बिनय गरे उसलाई आवश्यक खर्च आँफै आएर तिर्ने बाचा गरे । उसले पनि सहयोग गर्यो । फारो हस्पिटल लगेर उपचार गराए भाई साह्रै खुसी भए मलाई हृदय देखि धन्यवाद दिए । मेरो सम्बन्ध तपाईहरु र मेरो कम्पनिमा काम गर्ने सबै सँग हक्की इमान्दार सहयोगी र प्रोफेसनल थियो ।
माथि उल्लेख गरेको यर्थाथका बाबजुत आज यो पत्र कोरीरहँदा मलाई पोर्तुगलको अदालतमा श्रम शोषणको अभियोगमा १४ वर्षको सजाय सुनाईएको छ । म सँगै मेरो कम्पनिमा विशुद्ध प्रशाससनिक कार्य गर्ने उपेन्द्रराज पौडेललाई समेत उहि अभियोग १३ वर्षको सजाय भएको छ । यो कहालीलाग्दो सजायले अचम्म लागेको छ । मनमा सयौँ प्रश्नहरु भरिदिएको छ । जिन्दगीका सबै अंगहरु क्षतविक्षत भएका छन् । आफ्नो प्राण भन्दा प्यारो परिवारको दुर्दसा भएको छ । बाबु आमा दाजु भाई परिवार सबै भावविहल भएका छन् । आँखाका नानी जस्ता २ छोराछोरी बेसहारा र उनीहरुको भविष्य अन्योल भएको छ ।
प्यारी दुलहीको मनमा के भईरहेको होला सोच्न पनि सक्दिन । एक दशक भन्दा बढी समय सम्म विदेशमा रगत पशिना बगाएर जम्मा गरेको सम्पुर्ण भौतिक सम्पति पोर्तुगल सरकारले जफत गरेको छ । पक्राउ परेको दिन देखि फैसला हुने दिन सम्म फरक फरक लएर हरुले ३० हजार युरो भन्दा बढी खर्च भएको छ । भगवान माथी भरोसा राख्दै आफ्ना इमान्दारीतालाई विश्वास लिई फैसलाको दिनमा स–सम्मान मुक्त हुने ठुलो आशा माथी १४ वर्षको सजाय बज्रपात भएको छ । म जस्तो सामान्य व्यक्तिको जिवनमा यस्तो विपत्ति आईलाग्नुको एउटा मात्र कारण रहेको छ ‘‘पोर्तुगलको रेसीडेन्सी कार्ड’’
एउटा जाबो रेसीडेन्सी कार्डको लागि आफ्नो परिवार जस्तै गरी सँगै बसेका एउटै घरमा खाएका नेपाली तिमिहरुले मलाई किन बलीको बोको बनाउनु पर्यो र १० हजार भन्दा बढी नेपालीले मेहनत र इमान्दारी पुर्वक पनि त बनाएका छन् …तिमिहरुले सेफ पुलिससँग दिएको झुठो र गलत बयानले मेरो र उपेनको जिवन तहस नहस भएको छ ।
म तिमिहरुसँग यस पत्र मार्फत निम्न प्रश्नहरु सोध्न चाहन्छु । कृपया इमानदारी पुर्वक नेपाली डास्पोरामा र तिमिहरुको घर परिवार आफन्त र आफ्नो धर्म साक्षी राखी सत्य जवाफको अपेक्षा गर्दछु ।
१)सुरज अधिकारी भाई तिमि हामीसँग काम गर्दा खुसी थिएनौ र ? अरुको कम्पनिमा भएका कमिकमजोरी तिमिले नै हामीलाई रामकहानी सुनाउथ्यौँ हैन र ? टोरेस भेड्रासको साइटको काम सकिएपछि, हाल काम छैन लिस्वन जाँउ पछि काम भए खबर गरौँला भन्दा उपेन दाई मेरो कोहि छैन नबिन दाईलाई भनेर यतै बस्ने व्यवस्था मिलाइ दिन भनेर तिम्रो चाहना अनुसार उतै बस्ने व्यवस्था मिलाइ दिएको हैन र २ महिना काम नगरी बस्दा समेत तिम्रो ट्याक्स हाल्देको हैन र ? १ दिनको घण्टा सबै टिप्ने जिम्मा तिमिलाई दिएको हैन र सधैँ सेलरी समयमा नै आवश्यक खर्च हातमा र बाँकी पैशा बैँकमा ट्रान्सफर गर्देको हैन र ? पेड्रोकोमा काम गरेपछि थोरै समयमा अर्को साइड चेञ्ज गर्न खोज्दा दाई म थोरै काम गर्छु तर अर्को साईड चेञ्ज जान्न भनि तिमिले नै भनेको हैन र ? कम्पनीले तिम्रो एक युरो पनि बाँकी राखेको छैन हैन र ? तिमिलाई आवश्यक पर्ने इन्टरनेटका सिमहरु फोनका चार्ज कार्डहरु तिम्रो माग अनुसार उपेन दाइले २४औँ घण्टा उपलब्ध गराएको हैन र ?
२) सुर्य बहादुर आले भाई जब तिमि पोर्तुगल आयौ रिगेनले सिधै कस्केली भएको आधारमा म भएको ठाँउमा लिएर आयो तिम्रो स्वागतमा सुवाषको रेष्टुरेण्टमा सानो पार्टी नै भएको थियो ।
तिमि पोर्तुगल आँउदा न पासपोर्ट थियो न बस्ने स्थानको कुनै ठेगाना न आफन्त थिए न भाषाको ज्ञान तिमि लाई त अग्रेँजी भाषाको समेत सामन्य ज्ञान छैन । त्यस्तो परिस्थितीमा तिमिलाई आवश्यक पर्ने सबै सहयोग मैले गरेको हैन र ? रेस्तादोरसमा भएको पुलिस अफिसमा प्रत्येक दिन पचासौँ नेपालीको पासपोर्ट हराएको शिफारीस लिन जाँदा इरिटेट पुलिसले छिर्न नदिँदा भद्र दाई लगायत पोलिस थाना नजिकै बसे मैले तिमिलाई लगेर पुलिसलाई ४ ठेकी तेल घसेर पुलिस रिपोर्ट बनाई दिएको हैन र ? पुलिस रिपोर्ट पश्चात मेरै गाडी राखेर नयाँ पासपोर्ट बनाउने प्रक्रिया मैले नै गरेको हैन र ? फिनान्स कार्ड टाइट गरेको समयमा तिमी आँउदा ५ वर्ष को कार्ड भएको मानिस भद्र दाई र तिमिलाई गाडीमा हालेर लगेर फिनान्स कार्ड बनाईदिएको हैन र ? सुरुमा खेतीमा काम नगर्ने भन्यौ लिस्वनमा काम खोज्यौँ कतै काम नपाए पछि हैन हो दाजु कार्ड त बनाउनु पर्यो क्यारे भन्दै मगर टोनमा भनेर तिमि काममा लागेको हैन र ? घण्टाको खेतीको कामको रेट तिमिलाई थाहा थिएन हैन र ? काममा सबै भन्दा अल्छि र दिनमा २÷३ घण्टा मात्रै काम गर्दै वाइन पिएर हिड्ने तिमि होइनौँ र ऐ भाई काम नगर्ने भए लिस्वन जाउ भन्दा हत्तेरी दाई यस्तो नगर्नु न हो, कार्ड बनाउन छ म कहाँ जाउ त बिस्तारै कामको घन्टा बढाँउछु भनेको हैन र ?
४)दिपक के.सि भाई तिमि मलाई एउटा कस्केलीको नाताले भेट्दै लिस्बनमा काम खोज्यौ काम पाएनौ मलाई फेसबुकमा म्यासेज पठायौ मैले तत्काल काम छैन काम भए सोचौँला भने प्रत्येक दिन म्यासेज गरिरहेउ र पनि मैले काम उपलब्ध गराइन किनकी काममा ठाँउ खाली थिएन । त्यस पछि तिम्रो मनमा शंका लागेछ क्यारे दाईले काम दिँदैन की भन्ने तिमिले बढी नै मेहनत गर्न थाल्यौ दिनको एक पटक अफिस अगाडी आउन थाल्यौ एक हप्ता भन्दा बढी तिम्रो निरन्तर अफिस आउने कारणले गर्दा तिमीलाई काम नदिई मैले सुख पाइन । तिमि काममा गयौ तर कामको ज्ञान नभएको र अनुभव नभएको हुँदा तिमि लाई काम गर्न गाह्रो भयो ।
५)भाई दिपेश कणेल तिमिलाई याद छ की छैन ? तिमि उज्वल फुयाँल, शेखर भण्डारी अफिसमा आयौ उपेन दाईलाई भेट्यौ आफ्नो समस्या बढी दर्दनाक तरिकाले पेश गर्यौ । महिनाको अन्तिम थियो क्यारे २ दिन भित्र काममा नगए लिस्वनमा घर भाडा तिर्ने पैशा नभएको र माटीमुनिजको पार्कमा सुत्नु पर्ने संवेदनशिल अवस्था रहेको दुख देखायौ । हुन पनि त्यो समयमा दर्जनौ नेपाली पार्कमा बेवारीसे अवस्थामा सुत्ने गर्दथे नेपालीको चाप पनि बढेको थियो । आफ्नो सम्पर्क नहुने र समाज नखोज्ने नेपालीका दिनचर्या अत्यन्त दुखदायी थिए ।
उपेनले तिम्रो दुख मलाई जस्ताको तस्तै बतायो । एक हप्ता पछि कामको साईड सुरु हुने वाला थियो मैले १ हप्ता कुर्न भने तर उपेनले हैन अवस्था नाजुक छ एक हप्ता खेती तिरको घरमा लगेर भए पनि राखीदिउ सहयोग हुन्छ भने पछि ठिकै छ त भनेर काम सुरु हुन पुर्व नै तिमिलाई बस्ने व्यवस्था मिलाई दिए । बिस्तारै काम सुरु भयो सबै नर्मन भयो काम पनि राम्रो गर्यौ सेलरी पनि राम्रै बुझ्थ्यौ काम गर्ने १ पटक अचानक बिमार भयौ मैले तत्काल साईडमा गएर लिस्वनको साउजाउ हस्पिटलमा ल्याएर उपचार गराए तिमी ठिक भयौ । अनि काममा फर्केउ हो की हैन ?
EPL, LISBOA. RECULSO NO- 134&152
साभार - भ्वाइस नेपाल
EuropeNepal.Net: पोर्तुगलमा १४ बर्स जेल सजाय भोगिरहेका नवीन गिरिले लेखेको खुला पत्र एक पटक सबैले पढनै पर्ने ।